मध्यभोटेकोशी फेरि २ बर्ष धकेलिँदै, २ अर्ब लागत बढ्ने (भिडियो) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मध्यभोटेकोशी फेरि २ बर्ष धकेलिँदै, २ अर्ब लागत बढ्ने (भिडियो)
अर्थ डबली, प्रदेश, प्रदेश न. ३, शीर्ष समाचार
सिन्धुपाल्चोक । १०२ मेगावाटको निर्माणधिन मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमै नसकिने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको चाकुमा निर्माणधिन भोटेकोशी आयोजना विनाशकारी भुकम्प, भोटेकोशी बाढीको कारण ढिलाई हुने आयोजनाले बताएको छ ।
१४ अर्ब ८४ करोड लगानीमा आयोजना बन्दैछ । चिनियाँ ग्वाङसी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिकले आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको हो ।
मध्यभोटेकोशी २ बर्ष धकेलिने
सन् २०१३ बाट काम शुरु भएको आयोजनामा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । तर आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामा भने ४२ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्छन् । ‘आयोजनाको खर्च ४२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ’ आयोजना प्रमुख लामाले खबरडबलीसँग भने । सन् २०१७ सम्म आयोजनाको काम सकाउनुपर्ने भुकम्प र बाढीको कारण २ बर्ष म्याद थपेर सन् २०१९ जुनमा काम सकाउनुपर्ने काम नसकिने लामाले बताए । विभिन्न अवरोधका कारण थपिएको २ बर्ष सन् २०१९ जुनबाट पनि २ बर्ष पछि आयोजना धकेलिने लामाले खबरडबलीलाई बताए । २ बर्षपछि धकेलिनु भनेको सन् २०२१ सम्म आयोजना पुग्नु हो ।
अायोजना प्रमुख सुनिल लामा
तर सन् २०२१ सम्मका आयोजनाको काम सकिन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने लामाले बताए । ठेकेदारले कामदारहरु राम्रोसँग लगाउन सके, आयोजनामा लाग्ने सामानहरु समयमै आइपुगे मात्र सन् २०२१ भित्र काम सकिन्छ । यदि सामान र कामदार अभाव भयो भने अद्धैपछि धकेलिने लामाले बताए । ‘तोकिएको समय सकिन अब ७ महिना बाँकि छ’ लामाले भने ‘राम्ररी काम भयो भने टनेल २ र ३ को चैं ‘ब्रेक थु’ हुन्छ ।’ टनेल १ ‘ब्रेक थु’ हुन अलि समय लाग्ने लामाको भनाई छ ।
तर काम ढिलाई हुनुमा भुकम्प र बाढी पहिरोलाई मुख्य कारण देखाएर आयोजना पन्छिन् खोजेको आयोजना प्रभावित एक स्थानीयले बताए । ति स्थानीयका अनुसार आयोजनाको व्यवस्थापकिए कमजोरीको कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको बताउँछन् । ‘भुकम्प र बाढी पहिरो पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु कारण हो, तर त्यो भन्दा बढी आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरीले हो ।’
कामदारलाई तलब नै दिदैंनन्
आयोजनाका कामदारहरुले समयमै तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिक–६ सखुवाका चन्द्रदास श्रेष्ठका अनुसार उनीहरुले जहिल्यै पनि एक महिनाको तलब छाड्नु परेको छ । ‘ठेकेदारलाई भन्यो भने आयोजनाले पैसा नदिएर ढिलाई भएको भन्छ’ श्रेष्ठले गुनासो गरे । उनीहरुलाई घोङजी हाइड्रोले नियुक्ति गरेको हो । ड्यामसाइड चाकुमा सेक्सनमा काम गर्ने उनीसँगै २५ जनाले तलब पाएका छैनन् । अन्य सेक्सनमा काम गर्नेहरुको पनि तलब नपाएको बताए ।
काम गर्न सिमेन्ट छैन्
अहिले आयोजनामा काम बन्द जस्तै भएको छ । एकातिर आयोजना लाग्ने सिमेन्टको अभाव छ । सिमेन्ट नभएको कारण तिहार अघिदेखि काम रोकिएको हो । भोलि वा पर्सिसम्म सिमेन्ट आइपुग्ने आयोजना प्रमुख लामाले बताए । ४५ दिनका लागि सामान स्टक राख्नुपर्ने आयोजनाले पहिला सम्झौता गरेपनि ठेकेदार कन्सलेन्सिको कारण काम रोकिनुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाको सुरुङभित्र काम गर्ने कामदारहरु पश्चिमका छन् । उनीहरु बर्षमा एक पटक मात्रै घर जान्छन् । उनीहरु दसैं मान्न घर गएकाले अहिले तिहार, छठ सकिँदा पनि आएका छैनन् ।
२ अर्ब लागत बढ्ने
यदि आयोजना सन् २०२१ सम्म धकेलिएमा आयोजनाको लागत पनि करिब २ अर्ब बढ्नेछ । त्यसो त डलरको भाउ जति बढ्यो आयोजना पनि त्यति नै महगिन्छ । आयोजनाको अनुसार सामानको भाउ पनि बढ्छ, कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने हुनाले स्वत आयोजनाको लागत महँगिनेछ । आयोजनाले हालसम्म करिब ६ अर्ब ऋण लिएकोमो त्यसको व्याज पनि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले कम्पनीलाई पैसा नदिएर काममा ढिलाई
आयोजनाले बाढी, पहिरो, नाकाबन्दीलगायत कारणले आयोजना ढिला भइरहेको दाबी गरेपनि ढिलाई हुनुको प्रमुख कारण हो चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट पैसा नपाउनु । अहिले कम्पनीले आयोजनासँग करिब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकि छ । कम्पनीले भुक्तानीको लागि पटक–पटक ताकेता गरेपनि आयोजना भुक्तानी दिन आलटाल गरेको बताइएको छ ।
मंसिर ४ गते, २०७५ - १४:०८ मा प्रकाशित
कुँवर खबरडबलीका संवाददाता हुन्, राजनीति र साहित्यमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले प्रदेश सदस्यहरुको नामावली टुंङग्याएको छ । नेकपाले मंसिर...
सिन्धुपाल्चोक । १०२ मेगावाटको निर्माणधिन मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमै नसकिने भएको...
सिन्धुपाल्चोक । नुवाकोटका ८२ बर्षिय यदुकुमार अधिकारी ४० बर्षदेखि कम्मर दुख्ने रोगबाट मुक्त छन् ।...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसमेत...
पूर्वमाओवादीलाई प्रदेशमा नेकपाको पद-नखाउँ भने बर्ष दिनको सिकार खाउँ भने…
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को आज बसेको सचिवालय बैठकले सात वटै प्रदेशमा नेतृत्व चयन...
काठमाडाैं । डा. बाबुराम भट्टरार्इ नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी...
काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा जाने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग...
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । २०३९ साल फागुन ७ गते सिन्धुपाल्चोकको तत्कालिन सानोसिरुवारी गाविस पौवा (हाल चौतारा साँगाचोकगढी...
काठमाडौं । आजै चार जना मन्त्रीको सपथ हुने सूचना बिहान बाहिरिएको थियो । शुरुमा सरकारलाई आजै पूर्णता...
थप १९ सय ४८ मा कोरोना पुष्टि, ३ हजार १४० जना निको भए
आयोगका आयुक्त पाठकलाई ७० लाख घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ
३६० कोरोना सङ्क्रमितको भोकै बसेर उपचार
तथ्याङ्कअनुसार विदेशी वस्तुको आयातमा कमी आउँदा निर्यातमा भने वृद्धि
लैङ्गिक हिंसापीडितको मानवअधिकार संरक्षणलागि संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
चन्द्रागिरिले साधारण शेयर बिक्री गर्ने, कति कित्तासम्म किन्न पाइन्छ ?
कोरोना विरुद्धको खोपले सफलता हासिल गरेपछि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
कोरोना सङ्क्रमणबाट उच्च ओहदाका को कति व्यक्ति प्रभावित ?
५० बिघामा लगाइएको करिब ३६ लाख अवैध गाँजाको बोट नष्ट